Ny BBC: Tantaran'ny Vahoaka avy amin'i David Hendy, Mpitsikera: 'Fanentanana Ara-moraly' ao anatin'ny firenena | boky tantara - World Book
Janoary 23, 2022 ny worldbook
Miaraka amin'ny fanambaran'ny sekreteran'ny kolontsaina Nadine Dorries tamin'ny herinandro lasa fa hajanona mandritra ny roa taona ny saran'ny fahazoan-dàlana, tsy azo antoka ny hoavin'ny BBC ary mety ho terminal, farafaharatsiny amin'ny fomba fantatsika sy tiantsika matetika. Amin'ny faha-zato taonany, ny fiarahamonina dia atahorana tsy avy amin'ity governemanta ity ihany, fa koa amin'ireo orinasan-tserasera izay nahazo tombony betsaka tamin'ny revolisiona nomerika. Zato taona lasa izay, ny BBC mihitsy no fanombohana nanandrana nanararaotra teknolojia vaovao nefa tsy dia takatra loatra: teknolojia tsy misy tariby.
Misy ny fahendrena maoderina momba ny fanombohana fa olona telo ihany no ilainy: olona iray hanamboatra ny vokatra, olona iray hahatonga azy ho mahasarika, ary olona iray hivarotra izany. Na, raha apetraka amin'ny fiteny ankehitriny, mpijirika, hipster, ary mpisoloky. David Hendy, mpampianatra ny haino aman-jery sy ny tantara ara-kolontsaina, dia nanokatra ny The BBC: Tantaran'ny vahoaka miaraka amin'ny lehilahy telo mitady birao hipetrahan'ny orinasa vaovaon'izy ireo, ny British Broadcasting Company, araka ny nahafantarana azy tamin'izany. Ireo lehilahy ireo dia i Cecil Lewis, mpanamory mpiady teo aloha izay mbola tany amin'ny fiandohan'ny faha-roapolo taonany ary manana fahatsapana idealy momba ny hasarobidin'ny kolontsaina; John Reith, moralista somary henjana amin'ny fandrindrana ny zotom-po; ary Arthur Burrows, ilay hany tena nanana traikefa niasa tamin'ny tambajotra tsy misy tariby.
Miaraka amin'ny fahazoan-dàlana mamorona, azonao atao ny milaza fa i Burrows no mpijirika, Lewis ilay hipster, ary Reith ilay hustler. Tsy mampiasa io taxonomy io i Hendy, fa kosa mampiseho ireo olo-malaza telo manan-danja ireo amin'ny fiposahan'ny tany izay ho lasa andrim-panjakana lehibe sy manan-danja indrindra eto amin'ity firenena ity.
Hendy dia nanonona an'i Clive James: "Ny Beeb dia andrim-panjakana lehibe, tsy maintsy miaro azy foana amin'ny fahavalony ianao, anisan'izany ny tenany."
Ny mpamaky dia ao anatin'ny tantara mampientam-po momba ny fanavaozana sy ny fahatapahan-kevitra rehefa nahomby tamin'ny fametrahana ny orinasany vaovao izy telo mianadahy ao anatin'ny fanoherana feno fankahalana sy mahery vaika avy amin'ny Fleet Street. Na izany aza, raha vao nampidirin'i Hendy ireo tarehin-tsoratra ireo dia afa-mandositra ny fitantarana izy ireo. Manam-pahefana hafa kosa no tonga ary tsy ela dia lasa i Lewis, lasa orinasa ny BBC ary ny fihainoana ny radio dia lasa fialam-boly manjavozavo ho an'ny mpanankarena ho lasa fialamboly nasionaly.
Ny fomba tena nitrangan'io fiovana io dia very ao anatin'ny fampahalalana be dia be izay tsy mahatonga azy io ho fitantarana mavitrika. Tantara nahazo alalana ilay boky, amin'ny heviny hoe nataon'ny BBC ho an'i Hendy ny tahiriny, saingy, araka ny nambarany, tsy misy fanaraha-maso na fitaomana amin'ny famoahana azy. Na izany aza, mbola misy ny fahatsapana adidy amin'ny fanoratana, ilaina ny manarona ny tany, na dia tsy mahaliana na vaovao aza izany.
Ny lafiny iray hafa amin'ny boky dia ny hoe "tantaram-bahoaka" izy io, izay midika fa misy singa iray amin'ny fomba fijerena vahoaka, izay anononana matetika ny mpihaino mba hanamafisana ny fifanarahana eo amin'ny gara sy ny mpihaino azy. Fifanarahana izay hitan'i Reith tamin'ny teny paternalistika, mitaky ny BBC handray ny andraikitry ny feon'ny fieritreretana nasionaly sy mpanentana ara-moraly, raha toa ka ara-teorika dia mitazona ny toeran'ny tsy mitanila amin'ny mpanao gazety.
Izany dia ary mbola mijanona ho fihetsika mampifandanja saro-pady, izay vao mainka sarotra amin'ny fifandraisan'ny BBC amin'ny fanjakana ary, maika kokoa, amin'izay governemanta eo amin'ny fitondrana. Araka ny nosoratan'i Hendy: "Satria tsy hampifaly ny olon-drehetra velively ny BBC, dia matetika izy io no niezaka ny tsy hanafintohina na iza na iza."
Lohahevitra tranainy ireny ka raisin'ny mpanoratra am-pahatsorana nefa tsy nampiana hevitra vaovao manokana. Saingy io fahatakarana ara-politika bebe kokoa momba ny BBC io no mahasarika azy imbetsaka.
Ao amin'ny fitantarana 570 pejy, maherin'ny 100 amin'izy ireo no natokana ho an'ny Ady Lehibe Faharoa, fony ny BBC no lasa feo ivon'ny anjaran'i Grande-Bretagne ary fantsona lehibe ho an'ny fampielezan-kevitry ny governemanta. Mora namorona angano koa izy. Ny kabary malaza nataon'i Churchill "Hiady amin'izy ireo eny amoron-dranomasina" dia mety nanaitra ny Commons, saingy tsy ny zava-niseho nanentana ny angano raha namerina izany tamin'ny radio izy, araka ny fampahatsiahivan'i Hendy antsika. .
Ny ady ihany koa dia nanemotra ny fivoaran'ny zavatra ho lasa zava-dehibe sy tanjon'ny BBC, dia ny fahitalavitra. Matetika ny BBC Trials no voampanga ho tsy liana amin'ny fampivoarana ny fandaharana, ary ny fanakianana mitovy amin'izany ihany no azo apetraka amin'ity boky ity, izay mirona kokoa amin'ny famerenana ny fifanolanana ara-pitantanana noho ny fikarohana talenta famoronana.
Amin'izao vanim-potoanan'ny korontana ara-teknolojia izao, izay latsaka toy ny tsipìka ny mpiandry vavahadin'ny kolontsaina, ny hevitra momba ny saram-pahazoan-dàlana sy ny fampielezam-peo ho an'ny daholobe dia toa miha-anachronistic, vulnerable izay ataon'i Dorries eo am-panararaotana. . Mazava ho azy fa miombom-pihetseham-po amin'ny fiaraha-monina i Hendy, ary nanonona an'i Clive James hoe: "Ny Beeb dia andrim-panjakana lehibe, tsy maintsy arovana mandrakariva amin'ny fahavalony, anisan'izany ny tenany."
Na izany aza, i James dia nahafantatra ny soa azon'ny BBC mihoatra noho ny tandindona sy ny tanjony. Mpahay ny vokatra tena izy izy, ary ny fahatsapan-tena lalina momba izay tafiditra amin'izany dia ny tsy ampy amin'ity tantara an-tongotra ity fa ny mpandeha an-tongotra.
Ny BBC: Tantaran'ny vahoaka nataon'i David Hendy dia navoakan'ny Profile Books (£25). Mba hanohanana ny Guardian sy Observer, manaova dika mitovy amin'ny guardianbookshop.com. Mety mihatra ny saram-pandefasana
Sokajy Vaovao farany Tags BBC, mitsikera, David, do, Dentro, hendy, tantara, boky, fitondran-tena, firenena, ny, enhancer, Pueblo Ticket navigation
Sequoia Nagamatsu's High We Go in the Dark Review: Mosaic of Pandemic Stories | tantara foronina